Posted by Tranquillus | Déc 26, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Theemail waa qalabka isgaadhsiinta ee la door bidayo inteena badan. Iimaylku aad buu u fiican yahay sababtoo ah uma baahnid in aan isku mar lahelno la-taliyahayaga si aan ula xiriirno. Tani waxay noo ogolaaneysaa in aan horay u sii wadno arrimaha hadda jira marka asxaabtayada aan la heli karin ama dhinaca kale ee adduunka.
Si kastaba ha noqotee, inteena badani waxay ku liqday liistada emayllada aan dhammaadka lahayn. Sida lagu sheegay warbixin la daabacay 2016, celcelis ahaan adeegsade ganacsi wuxuu helaa oo diraa in ka badan 100 emayl maalintii.
Intaa waxaa dheer, emails aad ayey u fududayd in la fahmo. Daraasadii ugu dambaysay ee Soomalidu waxay ogaatay in 64% dadka ay soo direen ama heleen email ay sababeen caro iyo wareer la'aan.
Iyadoo loo eegayo mugga emaylka aan dirno oo aan helno, iyo sababta oo ah emails inta badan waa la fahmi karaa, waa muhiim in la qoro si cad oo qeexan.
Sidee si sax ah u qori kartaa emayl xirfad leh
Qoridda gaabnaanta gaaban, saxda ah ayaa yarayn doonta waqtiga lagu kharashgareeyo maareynta emailka oo aad ka dhigi doonta wax soo saar badan. Haysashada cinwaanadaada gaaban micnaheedu waa waxaad u maleyneysaa inaad waqti yar ku bixisid e-mail iyo waqti dheeraad ah hawlaha kale. Taasi waxay tidhi, si cad u qoran waa xirfad. Sida xirfadaha oo dhan, waxaad u baahan doontaa ka shaqeyso horumarinteeda.
Ugu horreyntii, waxaa laga yaabaa inaad u baahato wakhti badan oo aad ku qorto emails gaaban sida qorista emails dheer. Si kastaba ha noqotee, xitaa haddii ay taasi tahay, waxaad ka caawin doontaa asxaabtaada, macaamiishaada ama shaqaalaha inay noqdaan kuwo wax soo saar badan, maxaa yeelay waxaad ku dari kartaa booska yar ee sanduuqa, kaas oo ka caawin doona inay si dhaqso ah uga jawaabaan.
Markaad si cad u qorto, waxaa laguu aqoonsan doonaa qof aqoon u leh waxa uu rabo oo waxna ka dhigaaya. Labaduba waxay ku fiican yihiin fursadahaaga shaqo.
Muxuu qaadanayaa si uu u qoro e-waraaqo cadcad oo dhamaystiran oo mihnad ah?
Nadiifinta e-waraaqaha mar walba waxay leeyihiin ujeedo cad.
Mar kasta oo aad u fariisto si aad u qorto email, qaado dhowr ilbiriqsi si aad isweydiiso, "Maxaan u dirayaa tan? Maxaan ka filanayaa qofka qaata?
Haddii aadan ka jawaabi karin su'aalahan, waa inaadan soo dirin email. Qorista e-mailka adigoon ogayn waxa aad u baahan tahay waxay kaa lumayaan waqtigaaga iyo kan aad ka heshay. Haddii aadan aqoonin waxa aad rabto, way kuugu adkaan doontaa inaad si cad u muujiso inaad si cad u sheegto.
Isticmaal "hal shay oo mar uun" ah
Emails maaha in la badalo kulamada. Iyada oo la kulmayo kulammada shaqada, inta badan waxaad ka shaqeyneysaa waxyaabaha ajandaha ah, si wax ku ool ah kulanku waa.
Iyadoo emails, ta soo horjeeda waa run. Markaad ka yar tahay mowduucyo kala duwan oo ku qoran emaylkaaga, waxyaabo badani waxay noqon doonaan kuwo caqli-gal ah oo aad uhoglahaaga.
Taasi waa sababta ay tahay fikrad wanaagsan in la dhaqan geliyo "hal shay oo waqti" ah. Hubi in email kasta oo aad soo dirto ay tahay hal shay. Haddii aad u baahatid inaad kuhesho mashruuc kale, ku qor email kale.
Sidoo kale waa wakhti fiican in aad isweydiiso, "Emailka dhabta ah miyaa lagama maarmaan yahay?" Mar labaad, kaliya e-mail oo kaliya ayaa lagama maarmaan u ah inay ka markhaati kacaan ixtiraamka qofka aad u dirto e-mail.
Ku dhaqanka naxariis leh
Empathy waa awooda lagu arko adduunka iyada oo loo marayo indhaha dadka kale. Markaad sidan sameyso, waxaad fahmeysaa fekerkooda iyo dareenkooda.
Markaad emails u dirto, ka fikir erayadaada ka soo xigta akhristaha. Wax walba oo aad qorto, naftaada weydii:
Sideen u turjumi karaa weedhan haddii aan helay?
Ma waxaa ku jira shuruudo aan la cayimin oo lagu sheegayo?
Tani waa qaab fudud, laakiin wax ku ool ah oo ku habboon habka ay tahay inaad wax u qorto. Ka fikirida dadka ku aqrin doona waxay badali doontaa sida ay kuugu jawaabaan.
Halkan waxaa ah habka isxumada leh ee lagu eegayo adduunka si uu kaaga caawiyo inaad bilowdo. Dadka intooda badan:
Ma mashquulaan. Ma haystaan ​​wakhti ay ku qiyaasaan waxa aad doonayso, waxayna jeclaan lahaayeen inay aqriyaan emailkaaga oo ay si dhaqso ah uga jawaabaan.
Ku raaxayso sharaf. Haddii aad wax ka sheegi kartid iyaga ama shaqadooda, samee. Ereyadaada lama luminayo.
Sidii loo mahadcelin lahaa. Haddii qaatuhu kaa caawiyo si kasta, xusuuso inaad u mahadnaqayso. Waa inaad samaysaa xitaa marka ay tahay shaqadooda ay ku caawiyaan.
Soo koob soo bandhiga
Markaad qof u dirto emayl markii ugu horreysay, waxaad u baahan tahay inaad u sheegto qofka aad heleyso cidda aad tahay. Inta badan waxaad ku sameyn kartaa hal jumlad. Tusaale ahaan: “Farxad bay ii ahayd inaan kugula kulmo [Dhacdada X]. "
READ Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay qorista qoraalkaaga xirfadeed?
Hal siyaabood oo lagu soo gaabiyo bandhigga waa inaad u qortaa sida haddii aad wajahayo wejiga wajiga. Ma rabi doontid inaad tagto shan daqiiqo oo dabaaldeg ah marka aad qof kula kulantid. Sidaas darteed, ha ku sameynin email.
Ma ogaan kartid in hordhac lagama maarmaan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad hore u la xiriirtay qofka qaata, laakiin ma garanaysid inay kuu xasuusan doonto. Waxaad ka dhigi kartaa aqoonsigaaga saxiixaaga elektarooniga ah.
Tani waxay ka hortagtaa isfaham la'aanta. Waxaad mar labaad u soo bandhigtaa qof hore u yaqaan in aad caqli gal tahay. Haddii aysan ogeyn haddii ay ku yaqaano, waxaad kaliya u ogolaan kartaa inay hubiso saxiixaaga.
Naftaada xaddid shan goor
Email kasta oo aad ku qorto, waa inaad isticmaashaa weedho kugu filan si aad u sheegtid waxa aad u baahan tahay, mar dambe. Dhaqdhaqaaq faa'iido leh ayaa ah inaad adigu xaddiddo shan goor.
In ka yar shan goor ayaa badanaaba waa mid naxariis badan oo qallafsan, in ka badan shan goor goor goynta.
Waxaa jiri doona waqtiyo aan suurtagal ahayn in lagu hayo emayl uu ku jiro shan goor. Laakiin xaaladaha badankood, shan xabood ayaa ku filan.
Aqbali anshaxa shanta shamaceed waxaadna ka heli doontaa adigoo si dhakhso ah u qoraya email. Waxaad sidoo kale heli doontaa jawaabo dheeraad ah.
Isticmaal erayada gaaban
1946, George Orwell wuxuu kula taliyay qorayaasha inay marnaba isticmaalin erey dhaadheer oo ah gaaban.
Talo-bixintan ayaa xitaa khuseysa maanta, gaar ahaan marka la qoro emayl.
Ereyada gaaban waxay muujiyaan ixtiraamka akhriyahaaga. Adiga oo isticmaala ereyada gaaban, waxaad u dirtay farriintaada si sahlan loo fahmo.
Isla sidaas oo kale waa weedho kooban iyo cutubyo. Iska ilaali qoraalada waaweyn ee qoraalka haddii aad rabto in fariintaada ay noqoto mid cad oo sahlan inaad fahamto.
Isticmaal codka firfircoon
Codka firfircooni wuu sahlan yahay in la akhriyo. Waxay sidoo kale dhiirigelinaysaa ficil iyo masuuliyad. Xaqiiqdii, codka firfircoon, jumladuhu waxay diiradda saaraan qofka ficilada sameynaya. Codka buuqsan, jumladuhu waxay diiradda saaraan sheyga mid ka mid ah falalkaas. Codka kalsooni leh, waxay u muuqan kartaa in waxwalbaha ay kali yihiin. Si firfircooni leh, waxay dhacaan oo kaliya marka ay dadku dhaqmaan.
Ku dhaji qaab dhisme
Maxay tahay fureka lagu keydiyo emailadaada? Isticmaal qaabdhismeedka caadiga ah. Tani waa template ah oo aad raaci karto email kasta oo aad qori.
READ Email template ah oo ku dhawaaqaya ka qaybqaadashadaada kulan kulan
Marka lagu daro in lagu dhigo emails aad gaaban, ka dib qaab dhismeedka caadiga ah ayaa sidoo kale kaa caawineysa inaad si dhakhso ah u qoroto.
Waqti ka dib, waxaad samayn doontaa qaab-dhismeed oo kuu shaqeyn doona. Waa kuwan qaab-dhismeed sahlan si aad u bilowdo:
Wicitaan ficil ah
Fariin xiritaan ah (Xirid)
Aan eegno mid kasta oo ka mid ah kuwan si qoto dheer.
Tani waa lineka koowaad ee emailka. "Hello, [First Name]" waa salaan caadi ah.
Markaad qof email u dirto markii ugu horeysay, amaankuna waa bilaw weyn. Cadaadiska si fiican u qoran ayaa sidoo kale u adeegi kara hordhac ahaan. Tusaale ahaan:
Waan ku riyaaqay bandhiggaaga oo ku saabsan [mowduuc] taariikhda [taariikhda]. "
“Waxaan ka helay bartaada (mowduuca) runtii waxtar badan. "
Waxay ahayd farxad aan kula kulmo [munaasabada]. "
Sababta emailkaaga. Qaybtaas, waxaad tiraahdaa, "Waxaan email u dirayaa si aan wax uga weydiiyo…" ama "Waxaan la yaabay haddii aad wax ka caawin karto help" Mararka qaarkood waxaad u baahan doontaa laba jumladood si aad u sharaxdo sababahaaga qorista.
Wicitaan ficil ah. Marka aad sharaxdo sababta emailkaaga, ha u qaadan in qofku qaato ogaan doono waxa la sameeyo. Bixi tilmaamo gaar ah. Tusaale ahaan:
"Ma ii soo diri kartaa faylalkaan illaa Khamiista?" "
"Ma qori kartaa tan labada toddobaad ee soo socota?" "
"Fadlan u qor Yann oo ku saabsan, oo ii sheeg markii aad samaysay." "
Adoo qaabeynaya codsigaaga qaab su'aal ah, qaataha waxaa lagu casuumay inuu kajawaabo. Haddii kale, waxaad kaloo isticmaali kartaa: "ii soo sheeg markii aad waxan sameysay" ama "ii soo sheeg haddii ay taasi caadi kuu tahay." "
xiritaanka. Ka hor intaadan dirin emailkaaga, hubi inaad ku darto farriin xiran. Tani waxay leedahay laba ujeedo oo ku celineysa wicitaankaaga ficilka iyo samaynta qofka qaata inuu dareemo wanaag.
Tusaalooyin khadad fiican oo xiran:
Waad ku mahadsan tihiin dhammaan kaalmadiina tan. "
“Ma sugi karo inaan maqlo waxaad u maleyneyso. "
“Ii sheeg haddii aad wax su’aalo ah qabtid. "
Si aad u dhameysato fekerkaaga inaad ku darto saxeexaaga kahor fariinta salaan.
Waxay noqon kartaa "Xaqiiqadaada", "Daacadnimo", "Maalin fiican" ama "Mahadsanid".
Sidee loo qoraa emayl cad oo xirfad leh? May 10th, 2020Tranquillus
horeQor emayl haddii aad maqantahay
socdaHagaajinta xirfadahaaga qorista